မြန်မာနိုင်ငံ မှာ အရေး ကိစ္စ ပေါ်လာတိုင်း ရှေ့တန်းက ကူညီဖို့ အသင့်ရှိနေတဲ့ မိတ်ဆွေ ကောင်း ပီသတဲ့ ဂျပန် – Let Pan Daily
မြန်မာနိုင်ငံ မှာ အရေး ကိစ္စ ပေါ်လာတိုင်း ရှေ့တန်းက ကူညီဖို့ အသင့်ရှိနေတဲ့ မိတ်ဆွေ ကောင်း ပီသတဲ့ ဂျပန်
Let Pan | August 15, 2020 | World News | No Comments
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် နိုဝင်ဘာလ ၈ ရက်‌နေ့ ၌ ကျင်းပရန် စီစဉ်ထားသည့် အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲ ကို တရားမျှတပြီး ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိသည့် ရွေးကောက်ပွဲတစ်ရပ်ဖြစ်စေရေး ဂျပန်နိုင်ငံက ယန်း ၁၈၁ သန်းတန်းဖိုးရှိ “ရွေးကောက်ပွဲ အကူအညီပေးရေး စီမံကိန်း” တစ်ရပ်ကို UNDP နှင့်ချိတ်ဆက်၍ ထောက်ပံ့ ပေးအပ်လိုက်ကြောင်းသိရသည်။
အဆိုပါစီမံကိန်းပေးအပ်ရေး အတွက် စာချွန်လွှာလက်မှတ်ရေးထိုးလဲလှယ်ခြင်းကို မနေ့က ရန်ကုန်မြို့ တွင် မြန်မာနိုင်ငံသို့ ပေးအပ်သည့် “ ရွေးကောက်ပွဲ အကူအညီပေးရေး စီမံကိန်း” အထောက်အပံ့နှင့် ပတ်သက်သည့် စာချွန်လွှာလက်မှတ်ရေးထိုးလဲလှယ်ခြင်းအစီအစဉ်တစ်ရပ်ကို ယမန်နေ့က ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဂျပန် သံအမတ် Mr. MARUYAMA Ichiro နှင့် ကုလသ မဂ္ဂဖွံ့ဖြိုးမှု အစီအစဉ်( United Nations Development Programme, UNDP) မြန်မာနိုင်ငံရုံး၏ တာဝန်ခံအရာရှိ၊ ဒုတိယဌာနေ ကိုယ် စားလှယ် Ms. Dawn Del Rio တို့က
စာချွန်လွှာလက်မှတ်ရေးထိုး လဲလှယ်ခဲ့ကြောင်း ဂျပန်သံရုံး၏ သတင်းထုတ်ပြန်ချက်အရ သိရသည်။
ထုတ်ပြန်ချက်တွင် လက်ရှိဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံ ဥပဒေအရ ယခုနှစ် နိုဝင်ဘာလတွင် မြန်မာနိုင်ငံ၌ တတိယအကြိမ် မြောက် အထွေထွေ ရွေးကောက်ပွဲကို ကျင်းပရန်စီစဉ်ထားပြီး တရားမျှတပြီး ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိ သည့် ရွေးကောက်ပွဲကို ကျင်းပခြင်းသည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဒီမိုကရေစီစနစ် တည်တံ့ခိုင်မြဲရေး အတွက် အရေးကြီးသောခြေလှမ်းဖြစ်ကြောင်း ပါရှိသည်။ ထိုကဲ့သိုသော အခြေအနေများတွင် ဤစီမံကိန်း အရ UNDP နှင့် ချိတ်ဆက်၍ မြန်မာနိုင်ငံ တစ် ဝန်းရှိ မဲရုံများအတွက် အလွယ်တကူ ဖျက်ပစ်၍မရသော မင်ရည်များ ပေးအပ်ပြီး မဲဆန္ဒရှင်များ တစ်ကြိမ်ထပ်ပို၍မဲပေးခြင်းကို ကာကွယ်တားဆီးနိုင်ရန် အသုံးပြုခြင်းဖြင့် တရားမျှတပြီး ပွင့် လင်းမြင်သာမှုရှိသော ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပနိုင်ရန်အတွက် အထောက်အကူ ပြုခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ဂျပန်နိုင်ငံအစိုးရသည် ယခင်တစ်ခေါက် ၂၀၁၅ ခုနှစ် အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲတွင် လည်း ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပရာတွင် လိုအပ်သည့် ပစ္စည်းများ ထောက်ပံ့ပေးအပ်ခြင်း၊ ရွေးကောက်ပွဲ စောင့်ကြည့်လေ့လာအရေးအဖွဲ့များ စေလွှတ်ခြင်းကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး ယခု ဒုတိယအကြိမ် မြောက် ပံ့ပိုးကူညီခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ယခုတစ်ခေါက် ထောက်ပံ့သည့် စီမံကိန်းမှတစ်ဆင့် လွတ် လပ်ပြီး တရားမျှတသော ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပနိုင်ရန် ပံ့ပိုးကူညီပြီး နောက်ပိုင်းတွင်လည်း မြန်မာ နိုင်ငံ၏ ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်များကို အစွမ်းကုန် ဘက်ပေါင်းစုံမှ ဆက် လက် ပံ့ပိုးကူညီသွားပါမည်ဖြစ်ကြောင်း သံရုံး၏ ထုတ်ပြန်ချက်တွင် ပါရှိသည်။
source : ပန်ပန်
မွနျမာနိုငျငံ မှာ အရေး ကိစ်စ ပျေါလာတိုငျး ရှတေ့နျးက ကူညီဖို့ အသငျ့ရှိနတေဲ့ မိတျဆှေ ကောငျး ပီသတဲ့ ဂပြနျ
မွနျမာနိုငျငံတှငျ ၂၀၂၀ ပွညျ့နှဈ နိုဝငျဘာလ ၈ ရကျ‌နေ့ ၌ ကငျြးပရနျ စီစဉျထားသညျ့ အထှထှေရှေေးကောကျပှဲ ကို တရားမြှတပွီး ပှငျ့လငျးမွငျသာမှုရှိသညျ့ ရှေးကောကျပှဲတဈရပျဖွဈစရေေး ဂပြနျနိုငျငံက ယနျး ၁၈၁ သနျးတနျးဖိုးရှိ “ရှေးကောကျပှဲ အကူအညီပေးရေး စီမံကိနျး” တဈရပျကို UNDP နှငျ့ခြိတျဆကျ၍ ထောကျပံ့ ပေးအပျလိုကျကွောငျးသိရသညျ။
အဆိုပါစီမံကိနျးပေးအပျရေး အတှကျ စာခြှနျလှာလကျမှတျရေးထိုးလဲလှယျခွငျးကို မနကေ့ ရနျကုနျမွို့ တှငျ မွနျမာနိုငျငံသို့ ပေးအပျသညျ့ “ ရှေးကောကျပှဲ အကူအညီပေးရေး စီမံကိနျး” အထောကျအပံ့နှငျ့ ပတျသကျသညျ့ စာခြှနျလှာလကျမှတျရေးထိုးလဲလှယျခွငျးအစီအစဉျတဈရပျကို ယမနျနကေ့ ပွုလုပျခဲ့ပွီး ပွညျထောငျစုသမ်မတမွနျမာနိုငျငံဆိုငျရာ ဂပြနျ သံအမတျ Mr. MARUYAMA Ichiro နှငျ့ ကုလသ မဂ်ဂဖှံ့ဖွိုးမှု အစီအစဉျ( United Nations Development Programme, UNDP) မွနျမာနိုငျငံရုံး၏ တာဝနျခံအရာရှိ၊ ဒုတိယဌာနေ ကိုယျ စားလှယျ Ms. Dawn Del Rio တို့က
စာခြှနျလှာလကျမှတျရေးထိုး လဲလှယျခဲ့ကွောငျး ဂပြနျသံရုံး၏ သတငျးထုတျပွနျခကျြအရ သိရသညျ။
ထုတျပွနျခကျြတှငျ လကျရှိဖှဲ့စညျးပုံအခွခေံ ဥပဒအေရ ယခုနှဈ နိုဝငျဘာလတှငျ မွနျမာနိုငျငံ၌ တတိယအကွိမျ မွောကျ အထှထှေေ ရှေးကောကျပှဲကို ကငျြးပရနျစီစဉျထားပွီး တရားမြှတပွီး ပှငျ့လငျးမွငျသာမှုရှိ သညျ့ ရှေးကောကျပှဲကို ကငျြးပခွငျးသညျ မွနျမာနိုငျငံ၏ ဒီမိုကရစေီစနဈ တညျတံ့ခိုငျမွဲရေး အတှကျ အရေးကွီးသောခွလှေမျးဖွဈကွောငျး ပါရှိသညျ။ ထိုကဲ့သိုသော အခွအေနမြေားတှငျ ဤစီမံကိနျး အရ UNDP နှငျ့ ခြိတျဆကျ၍ မွနျမာနိုငျငံ တဈ ဝနျးရှိ မဲရုံမြားအတှကျ အလှယျတကူ ဖကျြပဈ၍မရသော မငျရညျမြား ပေးအပျပွီး မဲဆန်ဒရှငျမြား တဈကွိမျထပျပို၍မဲပေးခွငျးကို ကာကှယျတားဆီးနိုငျရနျ အသုံးပွုခွငျးဖွငျ့ တရားမြှတပွီး ပှငျ့ လငျးမွငျသာမှုရှိသော ရှေးကောကျပှဲ ကငျြးပနိုငျရနျအတှကျ အထောကျအကူ ပွုခွငျးဖွဈကွောငျး သိရသညျ။
ဂပြနျနိုငျငံအစိုးရသညျ ယခငျတဈခေါကျ ၂၀၁၅ ခုနှဈ အထှထှေရှေေးကောကျပှဲတှငျ လညျး ရှေးကောကျပှဲကငျြးပရာတှငျ လိုအပျသညျ့ ပစ်စညျးမြား ထောကျပံ့ပေးအပျခွငျး၊ ရှေးကောကျပှဲ စောငျ့ကွညျ့လလေ့ာအရေးအဖှဲ့မြား စလှေတျခွငျးကို ဆောငျရှကျခဲ့ပွီး ယခု ဒုတိယအကွိမျ မွောကျ ပံ့ပိုးကူညီခွငျးဖွဈပါသညျ။ ယခုတဈခေါကျ ထောကျပံ့သညျ့ စီမံကိနျးမှတဈဆငျ့ လှတျ လပျပွီး တရားမြှတသော ရှေးကောကျပှဲ ကငျြးပနိုငျရနျ ပံ့ပိုးကူညီပွီး နောကျပိုငျးတှငျလညျး မွနျမာ နိုငျငံ၏ ဒီမိုကရစေီနိုငျငံတညျဆောကျရေးလုပျငနျးစဉျမြားကို အစှမျးကုနျ ဘကျပေါငျးစုံမှ ဆကျ လကျ ပံ့ပိုးကူညီသှားပါမညျဖွဈကွောငျး သံရုံး၏ ထုတျပွနျခကျြတှငျ ပါရှိသညျ။
source : ပနျပနျ
တောင်ကိုရီးယား ကို နောင်တရဖို့ စစ်တိုက်မယ့် အစီအစဉ် ကို ကင်ဂျုံအန် အံ့အား သင့်ဖွယ် ဖျက်သိမ်း ခဲ့မှု ရဲ့ နောက်ကွယ်က အကြောင်းရင်း
ကိုယ်ဝန်ဆောင် ဆင်မကြီး စားတဲ့ နာနတ်သီး ထဲကို ဗျောက်အိုး ထည့်ပေး လိုက်တဲ့ ရက်စက်တဲ့ လုပ်ရပ်
မဟာမိတ် ခေါင်းဆောင် များ၏ ပြစ်ပယ်ခြင်း ခံနေရသည့် သမ္မတ ထရမ့် ရဲ့ အထီးကျန် သူ့ဘဝ